Costa Rica: Ny Fahatongavan’i Shina · Global Voices teny Malagasy
Costa Rica: Ny Fahatongavan'i Shina
Voadika ny 20 Jona 2017 17:43 GMT
Vakio amin'ny teny Deutsch, Español, 日本語, 繁體中文, 简体中文, English
Noho ny fanomezam-boninahitra ambony ho an'ireo miaramila [es], niarahaba ny filoha Costa Rikàna sady nahazo ny Loka Nobel ho an'ny Fandriampahalemana, Oscar Arias i Shina, izay toe-javatra mety hitan'ny sasany fa mahatsikaiky. Namoaka sary sy lahatsary misy ny fitsidihana ny bilaogy Fusil de Chispas [es] .
Inona no dikan'ity fifandraisana ara-politika sy ara-barotra vaovao ity? Nahoana i Costa Rica no niala tamin'ny fifandraisana ara-politika 60 taona tamin'i Taiwan mba hanomboka fifandraisana vaovao amin'ny goavan'ny varotra ao Aziatika, Shina? Miresaka momba ireo tombontsoa sasany tamin'ny fiovana ilay bilaogera Roy Rojas ao amin'ny News Star [es]. Mihevitra ny sasany fa marobe ny tombontsoa ho an'ny firenena tahaka an'i Costa Rica satria tsy afaka ampitahaina amin'i Shina velively i Taiwan mikasika ny fahefana ara-toekarena sy ny toerana iraisampirenena. Costa Rica no firenena tokana ao amin'ny faritra manana fifandraisana ara-politika ofisialy amin'i Shina. [es]
Hatramin'ny niandohan'ny fifandraisana, nifamaly ny fitsidihana teo amin'ny firenena roa tonta. Araka ny tatitry ny Tiquicia hoe, nitsidika an'i Costa Rica mandritra ny fitsidihana ofisialy 4 andro ny delegasiona mpanao lalàna Shinoa tarihin'i Jiang Enzhu, ka nihaona tamin'ny filohan'ny Antenimieram-pirenena, Francisco Antonio Pacheco, sy ny minisitry ny raharaham-bahiny, Bruno Stagno, izy ireo.
Nilaza momba ity fitsidihana manan-danja ity ihany koa ny bilaogy iraisam-pirenena. Ny bilaogim-paritra Nicaragua Hoy [es] ohatra nanoratra momba ity fitsidihana ity tao amin'ny pejiny fidirana ary nanoratra ny lahatenin'ny filoha, Arias, izay nilaza hoe,
Para las empresas chinas, Costa Rica constituye un mercado sumamente atractivo, no sólo por el nivel de educación de nuestra mano de obra, sino también por el potencial de exportar a los Estados Unidos libre de impuestos.
Ho an'ireo orinasa Shinoa, manana tsena manintona tanteraka i Costa Rica, tsy noho ny fari-pahaizan'ny mpiasa ihany, fa noho ny fahafahany manondrana entana tsy mandoa hetra any Etazonia.
Manondro ny fankatoavana vao haingana momba ny Fifanekena Varotra Malalaka amin'i Etazonia izay nolaniana tamin'ny fitsapa-kevi-bahoaka manerana ny firenena ny lahatenin'i Arias.
Nandritra ny andro voalohany fitsidihan'i Shinoa, nambara ny fifanekena hanondrana makamba 150 tapitrisa dolara Costa Rikànna mankany Shina, izay narahin'ny fampiasam-bola an-tapitrisany maro avy amin'ny orinasa Shinoa eo amin'ny sehatry ny fanadiovana solitany Costa Rikàna. Nanoratra momba ny fampiasam-bolan'ny teknolojia finday ihany koa ny bilaogy iraisampirenena Actualidad [es], izay Mpanaramaso Ibero-Amerikana ao Azia-Pasifika.
2 andro izayKiobà